5 Matipi Ekutora Yako Bhizinesi Mabrochure kumusoro Up Notch Martech Zone
Svondo, Kubvumbi 12, 2015 Douglas Karr
Yako yekutengesa-pepa-rimwe, midhiya kit, bhurocha, PDF, chigadzirwa chigadzirwa ... chero chaunoda kuidana, inoda rubatsiro. Isu tichangobva kuisa pamwechete midhiya & yekutsigira kit yeiyo saiti mushure mekukumbira mushure mekukumbirwa kwaitwa.
Chokwadi ndechekuti, vanhu vachiri kuda kurodha pasi uye kupurinda zvinyorwa uye isu tichiri kuda kugovera zvigadzirwa zvekudhinda nemaoko. Pasina kutaura nezve chokwadi chekuti yakanaka yekudhinda chidimbu inogona kuwana yakanyanya kutarisisa. Iri kutendeuka kuita musiyano uye mazhinji tsamba dzakananga uye mushandirapamwe wekuparadzira akananga ari kuona kusimukira mukupindura nekuti hapana kwakawanda kukwikwidza kunze uko
Kuda A Dhinda muIreland yakaburitsa iyi infographic kupa matipi anozokubatsira iwe kuwana kutarisisa kwakawanda pamashandisiro ako, Kugadzira Yakakwana Bhizinesi Reji.
Ziva zvekutaura, wauri kuzvitaurira ani, matauriro acho, tarisa zvine hunyanzvi uye usavarega vakagara vasina basa. Saizi, musoro wenyaya, chimiro chemitsara, mifananidzo, mavara uye - kupfuura zvese - kushevedza-kuita-zviito, kwakakosha kubhurocha rakanaka. Isu tinokurudzirawo kushandisa imwe mhando yekutevera kwefoni kana trackable URL pachigamba kuti iwe uzive kuti ndeapi anoita zvirinani kupfuura mamwe.
Unoda Dhinda Inokurudzira iyo AIDA Fomula:
Attention - Ita kuti rive rinobata maziso.
mubereko - Chengeta muverengi afarire.
chido - Gadzira chishuwo uchishandisa mifananidzo inonyengetedza neruzivo.
Action - Kurudzira muverengi kutora matanho.
Tags: akabatsirabhurochadhizaini yebhurochabepamedia kitunoda kudhindwavanodaaprintrimwe-jirarimwe-jira dhizainiPDFchigadzirwa bhurochakutengesa rimwe-jirarutsigiro kit